Waan ku aaminay waana i khiyaantay! | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo VS Cosoble
Madaxweynihii hore ee Maamulka Hirshabeelle, Cali Cabdullahi Cosoble, ayaa ka sheekeeyay, ballaan ay isaga iyo Farmaajo, wada sameysteen, taasoo ku dhamaatay khiyaano iyo in xilka si sharci darro ah looga tuuro Cosoble.
Waxey aheyd bishii Ramadan ee 2017 markaanu xafiiskaaga ku yeelannay shir socday qiyaastii 2 saacadood, wada hadal dheer kaddibna waxaan wada hadalkeenii ku soo gunaanadnay "in la is aamino", intaa kuma aadan ekaan ee waxaad jalleecday "kitaab quraan" oo miiska kuu dul saarnaa. Waad istaagtay waxaadna tiri "kitaabka Alle ayaan isku aamineynaa". Waxaad weliba soo jeedisay inaan annagoo isi salaameyna aan kitaabkana gacanta kale saarno.
Waxaan labadeenaba ku dhaaranay inaan is kaalmeysanno, siyaasadda mid ka ahaanno, Inaan kugu garab istaago arrimaha guud ee dalka adigana aad iga saaciddo horumarinta degaanka. Dhaarta kaddib waxaad English ku tiri "I watch your back, you watch my back" anigana waxaan kuugu jawaabay "waa ballan".
Waxaan gaaray Jowhar waxaana ka sii daray fowdadii ay muhandasiinteeda ku sugnaayeen Villa Somaliya. 48 saac kadib ayaad toos ii soo wacday waxaadna iga dalabtay inaan kuu imaado, warkaagana wuxuu ahaa "ii kaalay arrintaan waan dhameyneynaa".
Waxaad qirtay waxa Jowhar ka dhacay ineysan sharciga waafaqsaneyn, waxaadna ii raacisay "Waxaan ogaaday koox ila shaqeysa iney arrinkaan abaabuleen, kedisna ay kugu noqotay".
MW Cali Cabdullahi Cosoble – KEYDMEDIA ONLINE